Ntinye Mgbasa ugba Ahụhụ na Sistemụ Ngwunye RF
Home / ngwa / Nkọwa na-aga n'ihu / Itinye n'ọkwa Preheating ịgbado ọkụ Automotive Parts
Ngalaba Na-ekpuchi Akụrụngwa na-agba ume
Category: Nkọwa na-aga n'ihu Tags: induction preheating ụgbọala, ewebata preheating akụkụ, nnyefe ọkụ na-ekpo ọkụ, ịgbado ọkụ preheating induction, nnyeghari ọkụ ọkụ, preheating ịgbado ọkụ usoro
Ngwunye nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Ebumnuche Iji kpoo ọkụ nke ụgbọ ala gwongworo karịrị 300 Celsius F n'ime 15 sekọnd maka ngwa mgbado ọkụ ma chekwaa ọnọdụ okpomọkụ n'ime mpaghara ịgbado ọkụ maka sekọnd 15 mgbe ike dị
Ihe ígwè gwụrụ ígwè; 350 Celsius na 400 Celsius F okpomọkụ na-egosi agba; 350 Celsius, 375 Celsius na 400 Celsius F okpomọkụ na - egosi "pencil"
Okpomọkụ 350 ° F
Akụrụngwa DW-HF-35kW akụrụngwa ike, ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ yana ihe nchekwa 1.2 andF anọ na oghere a na-emepụta pancake nke ahaziri iche.
Usoro A rụpụtara ihe ndozi iji gbanwee 400 Celsius na 15 sekọnd ma tinye eriri eriri n'elu axle. A gbara axle ahụ (n'okpuru eriri igwe) agbajiri 350 Celsius na 400 Celsius F na-egosi agba. Mgbe a na-agbagharị axle ahụ, a na-etinye ike RF maka 15 sekọnd. Ihe niile
nke agba gbazee, na-akwado na ogo axle dị elu karịa 400 Celsius F. Emechiri ike RF ma tinye "crayons" okpomọkụ ahụ ozugbo na axle iji nyochaa ọnọdụ okpomọkụ. Agba nke 400 Celsius F agbazighi; 375 Celsius F crayon gbazee maka 15 sekọnd; na 350 Celsius F crayon gbazee maka 30
Nsonaazụ A na-eme ka axle nchara ahụ karịa 400 Celsius F n'ime sekọnd 15 na okpomọkụ dị elu karịa 350 Celsius na-echekwa maka sekọnd 30 mgbe agbanyụrụ ike, na-emezu ihe chọrọ nke ngwa mgbado ahụ.